Maxay yihiin faa'iidooyinka ee mashiinka cusub goynta stem suugo basbaas - Shiinaha Lu Lu Beeraha Qalabka
Maxay yihiin faa'iidooyinka Mashiinka goynta stem suugo basbaas cusub
Maxay yihiin faa'iidooyinka Mashiinka goynta stem chilli cusub? Mashiinka goynta stem Maxjarka waa qayb lagama maarmaan ah wax soo saarka beeraha meelaha qaarkood. Waxaa looga baahan yahay ah lama huraan ah horumarinta beeraha si loo hindiso mashiinka macquul ah oo hufan stem suugo basbaas goynta. A qaybiyaha kaabsikam dhameystiran ka kooban yahay shan qaybood: habka quudinta, habka gudbinta, nidaamka Karanka oo, iyo nidaamka dejinta.
Waa maxay rajada of stem suugo basbaas jarida mashiinka? Su'aasha Khasab ma aha in laga jawaabo dhaqso. Sababtoo ah ee wax soo saarka dhabta ah iyo nolosha, ma aha adag tahay in la helo wax yar dareenka ah inay dhawraan. Sanadihii la soo dhaafay, sahayda guud iyo baahida alaabta suugo basbaas ayaa kor u sannad ka sannad muddo. Waqtigan xaadirka ah, kaliya ee Qingdao, waxaa jira tuulooyin badan iyo magaalooyin ku hawlan soo saarka iyo processing alaabta suugo basbaas on qiyaasta weyn. Sidaas darteed, tirada macaamiisha iman kara mashiinka goynta stem suugo basbaas weli waa wax la yaab leh. Intaa waxaa dheer, guud ahaan dalka, Hunan, Sichuan iyo gobollada kale ee china ayaa sidoo kale soo saarayaasha badan oo gobollada oo suugo basbaas. Oo qaar ka mid ah goobahaas, Shaqada badeecada suugo basbaas ay weli ku jirto marxalad asalka ah ee camalfalaysaan, si marka ay jirto mashiinka suugo basbaas ay ku riday mishiino suugo basbaas ay suuqa ah, waxaa shaki la'aan waa la soo dhaweyn doonaa tirada ugu badan ee saaxiibada ridayeen. Iyo wax soo saarka noocan oo kale ah sida xaqiiqada ah kaa caawin doona inaad si loo hagaajiyo tayada wax soo saarka suugo basbaas.
Iyadoo horumarinta joogtada ah ee technology, waayo, dhammaan noocyada kala duwan ee mashiinada ku haboon nolosha, waxay sidoo kale bilaabay inuu u muuqdaan in suuqa. suugo basbaas Mashiinka goynta stem sidoo kale waa mid ka mid ah. Sidee in ay la tacaalaan noocyada kala duwan sida of suugo basbaas? Waxaa laga yaabaa in wali loo baahan yahay in la doorto ka hawlaha iyo mabaadii'da sida.
Qaab dhismeedka iyo qaab:
Tilmaamo 1.Performance: qalab this waxaa badanaa loo isticmaalaa adhijirrada suugo basbaas qalalan iyo qoyan, qalabka oolnimada jarida sare, dhaawac suugo basbaas hooseeyo, isla oggolyahay sare, la qabsado noocyo kala duwan iyo qaabka suugo basbaas (u baahan tahay in la kartoo), waxtarka ah mashiinka kaliya waa in ka badan 5 jeer suuqa waxyaabaha caadiga ah, waxqabadka mashiinka oo dhan gaadhay heer hoggaamineed oo caalami ah. Alaabta Tani, kaabaya qalabka kaabayaal ah sida ay ka saareen nijaasta iyo gaarsiinta, ka dhigi kara qaab si toos ah mashiinka oo dhan door muhiim ah ka ciyaari. Waa qalab muhiim u ah howsha tiro badan oo ah wax soo saarka beeraha. Waxaa bedeli kartaa tiro badan oo ah shaqaale, badbaadiyo kharashka hawlgalka, oo aad u hagaajiso waxqabadka shaqada.
2. Main mabda'a shaqeeya:-socodka ah ee rogid durbaanka shaandho, mindidii goynta ka baxsan oo derbigii dhululubo shaandheeyo soo saaro mishiinka si ay u xamili suugo basbaas in maraa xoog lagu socelineyn godka shaandheeyo, si loo gaadho ujeedada ay ka saareen xamili of suugo basbaas.